तत्काल उडान खुल्ने आस मर्यो ! अब जुन १ तारिख मात्र खुल्ने आयो सुचना ! – Yuwa Aawaj
बैसाख २९, २०७८ बुधबार 390
काठमाण्डाै : नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमाथिको प्र’तिबन्ध आउँदो जेठ १७ गतेसम्म लम्बिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मङ्गलवार एक सूचना निकाल्दै यसबारेमा जानकारी दिएकाे हाे ।
भारतसँग हप्तामा दुई उडान भने यथावत् नै रहने सूचनामा बताइएकाे छ । कोरो’ना भाइ’रसको महामा’री निय’न्त्रण गर्न सरकारले वैशाख मसान्तसम्म उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेकोमा सङ्क्र’मण बढ्दै गएपछि यसलाई लम्ब्याएर जेठ १७ सम्म पु¥र्‍याइएको हो ।
प्रतिबन्धकै अवधिमा एअरलाइन्सहरूले स्वास्थ्य सामग्री उडान, चार्टर्ड र कार्गो उडानको अनुमति भने पाउने भएका छन् । प्राधिकरणले प्रति’बन्ध लम्बिएकाेबारे वायु सेवा कम्पनीलाई जानकारी गराएकाे छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान लम्बिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँबाट फर्कने नेपाली प्रत्यक्ष प्रभा’वित हुनेछन् ।
आज ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भए, कतार एअरवेजको चार्टड जहाज बेलुकी पौने ७ बजे काठमाण्डौ आईपुग्यो !
काठमाण्डाै : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आज ६ वटा उडान भए । मेडिकल सामग्री लिन चीनको कु’म्निङ गएको हिमालय एअरलाइन्सको जहाज बिहानै काठमाण्डौ आइपुगेको छ ।
यस्तै नेपाल एअरलाइन्सको जहाज बेइजिङबाट काठमाण्डौ आईपुगेको छ । हिमालय एअरलाइन्सको चाटर्ड जहाज दिउँसो पौने २ बजे दोहा गएर राति सवा ७ बजे काठमाण्डौ आईपुगेको छ ।
यस्तै नेपालमा बिरामीको उद्धा’र गर्न दुबईबाट एअर एम्बुलेन्स दिउँसो पौने ४ बजे काठमाण्डौ आएर भारतको लखनउ गएको छ । यस्तै कतार एअरवेजको चार्टड जहाज बेलुकी पौने ७ बजे आएर पौने ८ बजे उड्यो । यस्तै हिमालय एअर’लाइन्सको जहाज आजै चीनको कुम्निङ जाँदैछ । – उज्यालो नेपाल
Prevटेकु अस्प’तालको भुइँमै उप’चार गराइरहेका बि’रामी भन्छन् – कतै भर्ना लिएन !
Nextअमेरिकाले नेपाललाई भ्रमण गर्न नहुने मुलुकको सुचीमा राख्यो, आफ्ना सबै नागरिक लैजाने !
सभापति देउवा भन्नुहुन्छ : कांग्रेसलाई पदको लोभ छैन, तर प्रधानमन्त्री पाए भाग्नेवाला छैन !